သက်ဦး: ဖားအောက်တရားစခန်း (ဂျာမနီ)
Posted by Thet Oo at 11:56 AM
ညီမဟိုးငယ်ငယ်တုန်းက အဘိုးသင်ပေးလို့ အာနာပါနနဲ့ မှတ်တာကို ပိုအားသန်ခဲ့တယ်။
ဆယ်တန်းအောင်လို့ ရိပ်သာဝင်ချိန်မှာ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကို ၀င်ဖြစ်တော့ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နည်း ပိန်ဖောင်းနဲ့ မှတ်ရတာမို့ ရုတ်တရက် မမှတ်နိုင်ဘဲ အခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားပြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းက နှာသီးဖျားတွေ ပိန်ဖောင်းတွေ မဟုတ်ဘဲ ထင်ရှားတဲ့ အာရုံကိုသာ မှတ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှ အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်။
ခုတော့ နှာသီးဖျားမှတ်တဲ့ အာနာပါနလဲ မှတ်နိုင်သလို ပိန်ဖောင်းနဲ့လဲ မှတ်လို့ရနေပြီ။ တကယ်တော့ သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေထဲက ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတာကို ရွေးချယ် အားထုတ်နိုင်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပါပဲ။
ကိုသက်ဦးရော နှာသီးဖျားမှာမှတ်တော့ ဘယ်လိုနေလဲ။ အဆင်ပြေခဲ့လား။
ကိုသက်ဦးပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေကို ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုသက်ဦးရေ ..နွေရာသီ အားလပ်ရက်မှာ ဘတ်ဂျတ်တွက်ပြီး ခရီး မထွက်ဖြစ်ပဲ ကိုသက်ဦးပြောသလို အိမ်မှာ်နေရင်း အင်တာနက်နဲ့နေ့မှန်းညမှန်းမသိ နပန်း လုံးနေတာ ၀ိတ်တက်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းလာတယ်၊ တရားစခန်း ၀င်ဖိုို့ကျတော့လဲဈေးကမနဲဘူးနော်။ အိမ်မှာပဲ တရားခွေဖွင့်ပြီးထိုင်မှထင်တယ်၊ အဆိုးကြီးတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူးလေ ၂ပတ်အတွင်း အပြင်းအထန်
လုံးဝကြည့်စရာမလိုပဲေ၇းနိုင်သွားပြီ၊ ဒါအမြတ်ပဲပေါ့လေ။
Very interesting. Can you explain to me What's Ar-Nar-Par-Na and how to apply it. Thanks
နှာသီးဖျားက ၀င်လေထွက်လေကို မှတ်တော့လည်း စိတ်က ပျံ့လွှင့်တာပါပဲ။ အလေ့အကျင့်တော့ အများကြီး လုပ်ရပါအုံးမယ်... မေဓာဝီ...
မြန်မာစာရိုက်တာ လေ့ကျင့်ပြီး ဘလော့ဂ်ပါဆက်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့ .. မိစံ...
Hello Anonymous! Thanks for your insteresting...